आयामहरू के हो, चेतना के हो, हाम्रो वास्तविकता कसरी निर्माण हुन्छ र त्यहाँ कति आयामहरू छन्? मार्टिन भिजल्याण्ड
हाम्रो 3-आयामिक संसार भित्र, कम से कम संसार हामी यो 3D मा हाम्रो आँखा संग देख्छौं, हामी आयाम गणित को परिभाषित गर्न सक्छन्, तर आध्यात्मिक आयाम को बारे मा? अवधारणा के हो? आयाम आध्यात्मिक वा धार्मिक संसारमा? यस लेखमा तपाईंले विस्तृत विवरण पाउनुहुनेछ र मैले यी व्यावहारिक उदाहरणहरू पढ्न पछि क्रिस्टल स्पष्ट हुनेछु! यद्यपि यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईंले पहिले नै यो थाहा पाउनुभयो र तपाईलाई यो पढ्नु पर्दैन, म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु कि तपाईं जिज्ञासालाई मुक्त गर्न दिनुहोस्। शायद तपाईं एक ईरेका पल प्राप्त गर्नुहुनेछ, तपाईले सोचेको यो शीर्षक पहिले नै तपाइँको लागि काटिएको थियो।
मा 'पलटान्डरहरूको कथा'मैले वर्णन गरे कि तपाई हाम्रो' वास्तविकता 'भित्र 2D र 3D बीचको भिन्नता देख्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, दुई-आयामीले फारमहरूको कुनै पनि बुझाइलाई बुझेको छैन bol of घन। यी रूपहरू दुई-आयामी संसारमा धेरै फरक फरक छन्। एक क्षेत्र जो फ्लैट विमान मार्फत उडेको एक अङ्क को रूपमा अचानक देखा पर्यो, लखेटेर विस्तार गर्दछ, फेरि संकुचित हुन र फेरि हराउछ। आफ्नो फ्लैट संसारमा दुई-आयामी प्राणीले डटको समय अनुभव, रेखा विस्तार, संकीर्ण रेखा, डट र फेरि केहि पनि गर्न सक्नेछैन। त्यो क्षेत्रको तिनीहरूको अनुभव अनुभव हुनेछ। तथापि, तीन-आयामी संसारमा, क्षेत्र पहिले नै यो विमान हो, पछि र पछि पछि पस्नु अघि। क्षेत्र र स्वरूपको दुवै समय धारणा दुई-आयामी प्राणीहरूको लागि भिन्न हुन्छ जुन तीन-आयामी व्यक्ति को लागि फ्ल्यास विमान मार्फत क्षेत्र बन्छ। हामी यो आयामी घटना गणित गणना गर्न सक्छौं। उदाहरणका लागि, हामी गणित रूपमा गणना गर्न सक्छौं चौथो आयाममा एक फारमको तीन-आयामी प्रतिनिधित्व कस्तो देखिन्छ? हामी यसलाई एक्लै कल्पना गर्न सक्दैनौं, किनभने हाम्रो मस्तिष्क तीन-आयामी सोचमा सीमित छ र यो हाम्रो धारणा पनि सीमित छ।
यदि तपाई पहिले नै अनुहार पहिले चकुर हुनुहुन्छ भने, यो छोटो परिचय को माध्यम ले, म तपाईंलाई आयाम देख्न को विभिन्न तरिका मा परिचय दिन चाहन्छु। सबै पछि, अक्सर आध्यात्मिक संसारमा आयामहरूको बारेमा कुरा गर्दै छन्, उदाहरणका लागि, तर यदि हामीले गणितीय परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु हुन्छ भने यो चाँडै चकित हुनेछ। आखिर, हामी भिजुअल केहि पनि कल्पना गर्न सक्दैनौं। हामी मा सबै भन्दा राम्रो एक जो उहाँले हामी हाम्रो आँखा द्वारा कथित प्रकाश को स्पेक्ट्रम हेर्न भने हामी भन्दा मानते, हाम्रो भन्दा बलियो छ भनेर कुकुर को गन्ध संग उदाहरणका लागि एक तुलना गर्न सक्छन् र जो उपकरण मापन गर्न सकिन्छ र ठूलो फरक पहिचान । हाम्रो आँखा, कान, हाम्रो गन्ध वा सबै meekrijgen मा केहि छुन जहाँ हामी वाइफाइ वा अन्य वायरलेस नेटवर्क, डाटा प्रवाह हाम्रो सेल फोन मा प्रदर्शन गर्न छ जसमा उदाहरण उद्धृत गर्न सक्छन्, तर। यसले 'अन्य आयाम' को एक बिट को एक विचार दिनेछ। यद्यपि, म यसलाई तपाईंको पुरा तरिकाले फरक परिप्रेक्ष्यमा राख्न चाहन्छु।
सबैभन्दा पहिला, म तपाईंलाई प्रविधिको वर्तमान टेक्नोलोजी अवस्थालाई छोटो परिचय दिन चाहन्छु। यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि हामी स्मार्टफोनको क्षेत्रमा ठूलो छलांगको कगारमा छौं। एलोन मुस्किलले पहिले नै यसो भने: "अब हामी कम मात्रामा सूचनाको साथ संवाद गर्नको लागि इन्टरनेटमा कम बैंडविड्थ प्रयोग गर्छौं जुन इन्टरनेटले हामीलाई प्रदान गर्दछ, किनभने हामी हाम्रो आँखा, कान र हाम्रा औँलाहरू प्रयोग गर्छौं कि यन्त्र नियन्त्रण गर्नको लागि हामी हाम्रो हातमा दिनका ठूला भागहरू हौं।"। त्यो नजिकको भविष्यमा फरक हुन सक्छ, किनकि विकास हाम्रो दिमाग अनलाइन ल्याउने लगभग तयार छ। हाम्रो आँखालाई पत्र, सबै ज्ञानका टुक्राहरू, कम्प्युटिंग क्षमता र मेमोरीले हाम्रो सबै मस्तिष्कमा धेरै ठूलो ब्यान्डविड्थमा थप गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारीको सबै पत्रहरू पढ्नुको सट्टा। यो कारणले हामीले ती ढिलो आँखाहरू हटाउनु पर्छ र हाम्रो दिमागको दृश्य केन्द्रमा आवश्यक अनुवाद। स्किप्टिक्स भन्छन् कि यो यो टाढा कहिल्यै प्राप्त हुनेछैन, किनकि यो केवल एक न्यूनरोन्स सबै ताररहित सञ्जालमा जडान गर्न असम्भव देखिन्छ। म 'रुट र हेर' को खडा लिन्छ र मानिन्छ कि एलोन मुस्कान DARPA को frontman हो जुन यस चरणमा बजारमा यस्तो प्रविधि ल्याउन अनुमति दिइएको छ। मेरो विचार कसरी व्याख्या गर्ने कामको बारेमा व्यायाम व्यायामको लागि, यो प्रविधि अब र5वर्षहरू (र सम्भवतः पहिले नै) भन्ने मानिन्छ।
अग्रिम जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि त्यस्तो टेक्नोलोजी छलांगको जटिलताहरू के हुनेछ। हामी वास्तवमा 'मस्तिष्कमा एक सानो कदम, तर मानवता को लागि एक विशाल छलांग', किनकि हामी चाँडै एक अवस्था तिर लाग्यौं जुन हामी त्रयी त्रयी म्याट्रिक्सबाट चिन्न सक्छौं, अर्थात् जसमा हामी 1x मा हाम्रो मस्तिष्कमा जानकारी डाउनलोड गर्न सक्छौं। तपाइँ साँच्चै आवश्यक डाटा नेटवर्कको गति (जो पहिले देखि नै 5G हुनेछ) एक हेलिकप्टर पायलट हुन वा कुंग फू जान्न डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको मेमोरीले ती चीजहरूको सबै मोटर जानकारी डाउनलोड गरेको छ। त्यसपछि तपाइँ यसलाई आफ्नो लामो-लामो मेमोरीमा राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले यो दोस्रो स्वभाव बन्छ, जस्तै यो थिए।
निस्सन्देह यो प्रविधि चरणमा चरण हुनु पर्छ, किनकि अन्यथा हामी समाजमा एक झटका प्रभावकारी हुनेछौं। अनि निस्सन्देह, यस्तो प्रविधिको परिचय अल्जाइमरको रूपमा रोगहरू समाधान गर्न आवश्यक पर्दछ, तर अन्त्यमा सोशल मिडियाले यो प्रविधिको आदीमा सामान्य जन प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। उदाहरणका लागि, हामी Instagram (वा नयाँ प्लेटफार्महरू) मा एक-अर्कासँग सम्झनाहरू साझेदारी गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामी एकअर्कालाई हाम्रो सपना देख्न सक्छौं र शायद पृथ्वीको धनीले Google बाट क्लाउडमा केहि अतिरिक्त मेमोरी पनि खरीद गर्न सक्दछ, त्यसैले स्नातक धेरै सजिलो छ। निस्सन्देह हामीले सबै बंदरगाहहरू 1 समयमा खोल्न सक्नुहुन्न।
त्यस सन्दर्भमा Netflix ब्ल्याक मिरर सीजन 1 एपिसोड3मा एक नजर राख्नुहोस्
अश्लील र खेल उद्योग यो क्रांतिकारी टेक्निकल चरणको सुरुवातमा एक प्रमुख ड्राइभिङ्ग बल पनि सम्भव छ। हामी पहिले नै यो यौन रोबोट संग भइरहेको देख्नुहुन्छ, जसको लागी पनि पहिले नै वेश्याहरू खोलिएका छन्। गेम उद्योग नयाँ संभावनाहरु बाट पूरा यस दुनिया को लागि पहिले नै तयारी गरिरहेको छ।
हामीले पहिले नै Google Glass को माध्यम ले आउन को स्वाद पाउछौं, माइक्रोसफ्ट Hololens र अन्य चश्मा जुन वास्तविक धारणामा एक तह प्रोजेक्ट गर्दछ। विस्तारित वास्तविकता (एआर) हामीले के भन्छौं। यदि हाम्रो दिमाग पछि अनलाइन छ भने, तपाईं आँखाहरू लिन सक्नुहुन्छ, जस्तै थिए। त्यसपछि तपाईले वास्तविक समयलाई समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको आँखाले के बुझ्न वा यो तहमा बिस्तारै बिगार्न सक्दछन्। ती व्यक्तिहरूले हाम्रो भिजुअल केन्द्रको पहुँचको साथमा हाम्रो सबै संवेदना धारणा संग छुट्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं सार्वजनिक शौचालयमा जानुहुन्छ, जहाँ गन्ध धेरै सुन्दर छैन, तपाईं आफ्नो मस्तिष्कमा त्यो केन्द्र गन्ध बिर्साउन सक्नुहुनेछ। तपाईले वास्तवमा मस्तिष्कमा हरेक संवेदना धारणालाई प्रोत्साहन दिन सक्नुहुन्छ। यो सम्भवत: मुख्य रूपमा प्रायः व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिनेछ, उदाहरणका लागि, अवसाद वा अन्य विकार। तपाईले केहि मनोवैज्ञानिक भावनाहरूलाई अधिलेखन गर्न भन्दा बढी सुन्दर छ। त्यसोभए हामी शायद एक चरण-दर-चरण परिचय हेर्न जाँदैछौं, तर यस बीचमा तपाईं सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव हुने कुराको ट्रयाक राख्न सक्नुहुन्छ।
त्यस सन्दर्भमा Netflix ब्ल्याक मिरर सीजन3एपिसोड5मा एक नजर राख्नुहोस्। सिजन4प्रकरण2यो सन्दर्भमा पनि उपयोगी छ।
यस साइटमा प्रायः उल्लेख गरिएको रे कुजवेइल, Google मा टेक्निकल घटनाक्रमका निर्देशक तथा दार्शनिक र आविष्कारकले यस विकासका बारेमा प्रस्तावित सम्भावनाहरूको बारेमा धेरै प्रस्तुतीकरणमा बोल्छ। सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो जुन सबै संवेदना उत्तेजना हाम्रो दिमागमा प्रसोधन गर्न सकिन्छ र हामी सिमुलेटिव संसारमा जीवन सुरु गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामी शाब्दिक दृष्टि, सुनवाई, टच, गन्धको क्षेत्रमा सबै कुरा प्रोजेक्ट गर्न सक्दछौं र सिधै हाम्रो मस्तिष्कमा स्वाद गर्दछौं। यो उपयोगी छ कि यदि तपाईंलाई एम्स्टर्डममा क्रसरोडको बीचमा उभिएको हुन्छ भने, तर यदि तपाई कुर्सीमा आराम गर्नुहुन्छ वा तपाईं बन्द कोठामा हुनुहुन्छ। यस तरिकाले तपाईं शान्ति र शानमा एक नयाँ नयाँ संसार अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले इन्द्रको क्षेत्रमा सबै कुरा, त्यसोभए, जीवनलाई वास्तविक वास्तविक मान्छ भनेर यो वास्तविक संसारमा जस्तै छ। मस्तिष्कमा पनि गुरुत्वाकर्षण गर्न सक्नुहुन्छ। केवल चलचित्र अवतार को बारे मा सोचना, तर उन सबै नीलो गुड़िया को बिना। यो तपाईंको वर्तमान अवलोकनको रूपमा वास्तविक लाग्न सक्छ।
हामी टेक्निकल तान्नु हुन्छ जहाँ हामी मानवहरू सिमुलेशनहरू निर्माण गर्न सक्दछौं जुन वास्तवमा फरक फरक छैन। तपाईंले पहिले नै प्लेस्टेशन खेल को एक प्रशंसक हुनुहुन्छ र कहिलेकाहीं तपाईं यस्तो खेल मा पूर्ण गुमाउन गर्छन भने, क्षण सम्म मस्तिष्क जडान हुँदा, तपाईं त अनुभव हुनेछ कि तपाईं साँच्चै खर्च गरौं खेल लागि प्रतीक्षा जंगल हिँड्ने र यदि तपाईं आफ्नो हतियार खाली गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईं गोली हतियार साँच्चै आफ्नो हतियारबाट उड्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ ब्याकलाश महसुस गर्नुहुन्छ र बान्नु सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि आफ्नो दुश्मन साँच्चै खून बह रहेको देख्नुहुन्छ र वास्तवमा सबै कुरा यथार्थको रूपमा बन्छ। भविष्यका खेलहरु तपाईंलाई सबै केहि अनुभव गर्न दिनुहोस्। त्यसपछि हामीले बिन्दुमा पुग्यौं जहाँ हामी बहुगुप्त खेलहरू सुरु गर्न सक्छौं जुन अब साँच्चै भेदभाव छैन। यदि मान्छे आफैलाई खेलमा 2D स्क्रिनमा हराउनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ उनीहरूको स्क्रिन पछि अन्तको लागि पछि बस्छ, खेल कसरी आजीवन हुन्छ! के हुन्छ यदि हामी पनि धेरै राम्रो र सकारात्मक सिमुलेशन पाउछौं। के हुन्छ भने हामी धेरै प्रलोभन सिमुलेशनहरू प्रदान गर्दछौं?
हामी अझै त्यहाँ छैनौं। शब्द 'आयाम' को राम्रो बुझ्नको लागि हामीले एक कदम अगाडी जान पर्छ। कल्पना गर्नुहोस् कि विद्यार्थीहरूको समूह चयन गरिएको छ एक वर्षको लागि सिमुलेशनमा। तिनीहरू सबै कुरा बुझ्न र अनुभव प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो दिमागमा अनुमानित हुन्छन्। हामीलाई सुविधाको लागि (र hypothetically) पनि आफ्नो मूल शरीर नैनो परिमार्जन कि सूर्यका आफ्नो छाला शरीर लागि इन्धन मा रूपान्तरण गर्न सक्छौं र त्यसैले तिनीहरू पंचहरु बाहिर बर्बाद गर्न आवश्यक छैन भनेर मान्छु गरौं। त्यसैले तिनीहरू वास्तविक संसारमा आफ्नो शरीरको बारेमा चिन्तित छैन र सिमुलेशनमा अवतार संग पूर्णतया पहिचान गर्न सक्दछ।
अब मानौं कि उनीहरूको अवतारले सिमुलेशन भित्रको समयको पूर्ण अनुभव गरेको छ (यहाँ फेरि Netflix मा ब्ल्याक मिरर सीरीज मा एक फरक समय अनुभव को एक उदाहरण हेर्नुहोस्: सिजन3एपिसोड 2)। अनुकार 1 वर्षमा वास्तव मा 1000 वर्ष सम्म पुग्छ। उनीहरूको अनुकरण अन्तर्गत तिनीहरू मर्न सक्छन्, अर्को शरीरमा फेरि जन्मे र तिनीहरू सबै प्रकारका विद्रोहहरूको अनुभव गर्न सक्छन्। केही समयमा उनीहरूले औद्योगिक क्रांति अनुभव गर्छन् र एक दिन तिनीहरूले कम्प्यूटर र इन्टरनेटको उदय देखाउँछन्। त्यसपछि एक निश्चित क्षणमा कुरा आउछ कि उनी स्मार्टफोनहरू हुन्छन् र ठूलो दूरीमा एकअर्कासँग कुराकानी गर्न सक्छन् (सिमुलेन्स भित्र)। तिनीहरूसँग iPhones र Facetime छ र अहिले सम्पूर्ण संसार उडान। केही समयमा खेलमा अवतारहरूको 1 नैनो-टेक्नोलोजी विशेषज्ञमा विकसित भएको छ जसले आफ्नो अवतार-मस्तिष्कलाई अनलाइन बनाउन सक्दछ। तिनीहरूले 1000 वर्ष पछि, तिनीहरूले एक मस्तिष्क जडान र त्यसपछि तिनीहरूले अन्ततः सीधा आफ्नो अवतार मस्तिष्क मा अनुमान एक सिमुलेशन निर्माण गर्ने क्षण खण्डन कि बिन्दुमा पुगेपछि छन्। त्यसपछि avatars को एक समूह यस नव निर्मित सिमुलेशन मा रहन निर्णय र पूर्ण अनुकरणमा कठपुतली संग पहिचान। यो किनभने सबै संवेदना धारणा सीधा उत्तेजित हुन्छ र यसैले सबैले आजीवन भोग्नु पर्छ।
नयाँ खेल मा तथ्याङ्कले सम्झना गर्ने आफ्नो खेल निर्माण गरेका छन् जसले अवतारहरूमा र एउटै अवतारहरूमा सम्झना छैन आफ्नो सिमुलेशन निर्माण गर्ने थिए र तिनीहरूले पनि एक सिमुलेशन मा बाँच्ने छैन। नयाँ खेलमा कुप्पाहरू2आयाम विद्यार्थीहरूको मूल समूह भन्दा गहिरो हुन्छन्।
यदि तपाईंले माथिको बुझ्नुभयो भने, तपाईंले 'आयाम' शब्दको नयाँ परिभाषा पत्ता लगाएको छ। म यो तपाईंको लागि संक्षेप गर्नेछु:
आयाम अनुकार भित्र अनुकारको परिणाम हो
यदि तपाइँलाई माथिको कथा राम्रोसँग चल्न दिनुहोस् र मेरो अर्थ के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने, तपाइँ तीन आयामहरू पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। मौलिक / पहिलो आयाम, जसको एक विद्यार्थी हो जुन विद्यार्थीको समूह हो। दोस्रो आयाम, जसमा एक विद्यार्थी हुनाले सिमुलेसनमा विद्यार्थीहरूको सिमेटारमा बस्छ। र तेस्रो आयाम, दोस्रो आयामबाट अवतारहरूले नयाँ खेलको कुप्पेटमा जीवन जारी राख्न नयाँ सिमुलेशन बनाएको छ।
ठीक छ, यदि म तपाईंलाई भन्छु कि लगभग 1 शताब्दी प्रयोगले देखाउँछ कि हामी पहिले नै सिमुलेशनमा बसिरहेका छौं, के तपाईं उच्च स्तरहरू छन् भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ? बस त्यो सिमुलेशन सिद्धान्तसँग कसरी छ भनेर पढ्नुहोस् यो लेख। यो गर यो केवल आध्यात्मिक र धार्मिक स्तर मा सबै कुरा बताउँदैन, तर सबै प्रकारको भौतिक कानुनी व्याख्या गर्दछ। सबै भन्दा माथि, यो क्वांटम भौतिकी बताउँछ (यदि तपाईं अहिले जान्नुहुन्छ भने के छ)। वास्तवमा, क्वांटम एवान्गोल्युशनको अवधारणा पूर्णतया छ किनकि गुगल क्लाउडले यसको प्लेटफार्ममा के गर्दछ क्लाउड एंकरिंग प्रविधि विवाहित सत्यताको लागि। र क्वांटम फिजिक्स देखि शब्द 'superposition' एक स्पष्ट संकेत हो सबै सम्भावनाहरू पहिले नै नक्कलको कोडमा लुकेको छ।
अन्तमा, एक प्रश्न: "के तपाइँ पहिलो आयाममा आफ्नो वास्तविक आत्म सम्झनुहुन्छ?"
तल लेखहरू अध्ययन गर्नुहोस् यो लिङ्क राम्रोसँग सहमत हुनुहोस् र यसको बारे फेरि सोच्नुहोस्। पछिल्लो लेखमा म यस प्रश्नमा फिर्ता आउनेछु कि त्यहाँ कति आयाम हुन सक्छ र कुन शब्द 'चेतना' वास्तवमा कंक्रीट सर्तमा छ।
मृत्युको डर किन सबै समयको सबैभन्दा ठूलो झूटो हो
ट्याग: 3D, आयामहरू, आयाम, विशेष, भ्रम, धर्म, इन्द्र, अनुकरण, आध्यात्मिकता, समय, अवलोकन, संवेदी, संवेदी
14 अक्टोबर 2018 मा 20: 29
धेरै रोचक लेख मार्टिन!
तपाईले दिईएको आयामको परिभाषाको सन्दर्भमा, म एक थप बनाउन चाहन्छु। तपाईंको आयामको परिभाषा हो:
"आयाम अनुकार भित्र अनुकारको परिणाम हो।"
स्रोत (वा पहिलो आयाम) जसबाट सबै आयामहरू उत्पन्न यो परिभाषाको अनुसार आयाम कहिल्यै हुन सक्दैन, किनकि स्रोत (वा पहिलो आयाम) अनुकरण भित्र अनुकारको परिणाम होइन। स्रोत (पहिलो आयाम) थियो, र सधैं हुनेछ। स्रोत (पहिलो आयाम) विनाशकारी छैन, यस स्रोत (प्रथम आयाम) बाट उत्पन्न सिमुलेशनहरू (आयामहरू) को विपरीत।
यसैले म एक अपवादको साथ एक आयामीको लागि तपाईंको परिभाषा विस्तार गर्नेछु; स्रोत वा पहिलो आयाम, जसबाट सबै आमाबाबु आयामहरू सिर्जना गरिएका छन्। एक आयामको लागि परिभाषा हुन सक्छ:
"आयाम स्रोत आयामको अपवादसँग एक आयाम भित्र अनुकारको परिणाम हो।"
यो स्रोत आयाम (वा पहिलो आयाम) मेरो विचारमा ईश्वरीय आयाम सबैबाट बनाइएको छ। "भगवान" वा "ईश्वरीय" हो यस प्रकार यो स्रोत आयाम र हरेक (बहु-आयामी) चेतना जसले यसले यो स्रोत आयामलाई यो स्रोत आयामसँग सम्पर्कमा हुनुपर्छ। दुर्भाग्यवश, पृथ्वीमा यो यो मामला अहिले होइन, जस्तै लुसिफरले "वास्तविकता" लाई ह्याक गरेको छ, त्यसैले यस समय अवस्था अझ बढी मनपर्छ: आफैलाई र सबैलाई हाम्रो लागि सबैलाई।
स्रोत आयाम अविश्वसनीय छ। यो यति सजिलो छ कि माथिको आयाम खराब छ, किनभने यी आयामहरू सिमुलेशन हुन्। यसैले मासु र रगतको मानव शरीर खराब छ, जस्तै सफ्टवेयर कार्यक्रम हो। विभिन्न सूक्ष्म निकाय (जसलाई पनि भनिन्छ) पनि अस्थिर र विनाशकारी हुन्छ, जुन एक अवतारमा मानव शरीर संग एक symbiosis मा प्रवेश। एक आयाम को परिभाषा संग, यो एक अपवाद "Atman", जो एक चेतना को गहिरो सार र "cosmic आत्म" संग समान छ। "Cosmic self" स्रोत आयाम (पहिलो आयाम) सँग बराबर छ।
14 अक्टोबर 2018 मा 20: 45
मलाई लाग्छ कि परिभाषाको राम्रो विस्तार हो।
यदि तपाईले डबल स्लिट प्रयोग राम्रोसँग विचार गर्नुभयो भने, हाम्रो शरीर (र त्यसैले हाम्रो दिमाग) अनुकरणको अंश हो। हाम्रो शरीर (वा मासु) पनि आत्मा र आत्माको धारणाको रूपमा मात्र अवस्थित छ। त्यो तपाईंको प्लेस्टेशन खेलमा कठपुतलीको रूपमा विनाशकारी छ।
साँच्चै materializes मात्र हो के हामी जीवन रूपमा अनुभव (superposition आउँछ) धारणा कारण: यो सबै (सबै म बारम्बार) भनेर बुझ्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। कुरा वास्तवमा अवस्थित छैन। यो कोड (/ जानकारी) जुन आत्मा (हरू) द्वारा बुझिएको छ। कुरा मात्र अवलोकनको परिणामको रूपमा अवस्थित छ, जस्तै स्क्रिनमा खेलकुदका कठपुतली र वातावरणले सफ्टवेयर र तपाइँको छनौटको परिणाम (र बहु ​​खेलाडी गेममा नियमहरूको आधारभूत सेट) को परिणाम हुन्।
यो कि कुरा अवस्थित थियो हाम्रो अर्थमा विरुद्ध भारी जान्छ, तर स्थिति नै चाँडै दोहोरिन रूपमा गुगल सिमुलेशन हाम्रो दिमाग मा प्रदान गर्नेछ र हामी मस्तिष्क मा संवेदी उत्तेजना छ पवित्र विश्वस्त हामी देख्न के रियल छ कि हुनेछ ।
मेनु वस्तु 'सिमुलेशन' अन्तर्गत अघिल्लो लेखहरूमा यसको बारे थप।
तपाइँको अतिरिक्तको लागि धन्यबाद।
14 अक्टोबर 2018 मा 20: 57
संयोगमा, मेरो व्याख्या केही अरु हो।
लुसिफरले यो सिमुलेशन ह्याक गरेन, तर यो सिमुलेशनको निर्माण गरे। हामी (हाम्रो आत्माहरू) यो खेल प्रयास गर्न को लागी प्रलोभन गरिएको छ।
जस्तै नै तपाईलाई थाहा छ कि यो एक सिमुलेशन हो, तपाई वास्तवमा जहाँ नै हुनु भएको छ: तपाईलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस् आफैलाई सम्झनुहोस्।
लूसिफर सिमुलेशनले अर्को सिमुलेशनमा पनि चलाउँछ। त्यस पछि यसको बारेमा।
साथै हामी वास्तवमा यहाँ गर्छौं र हामी के गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा थप। यस बीच, तपाईंलाई थाहा छ कि wr वास्तव मा यहाँ छैन ... हामी यसलाई देख रहे हो।
14 अक्टोबर 2018 मा 21: 06
यो एक जटिल मुद्दा हो, तर मेरो अंतर्दृष्टि अनुसार, लूसिफर यहाँ पृथ्वी र / वा यो सौर प्रणालीमा र यहा सम्म चिन्ता हुन सक्दिन, निगलिंदैन।
14 अक्टोबर 2018 मा 21: 58
मुद्दा यो हो कि यो पृथ्वी र यो ब्रह्मा लूसफर द्वारा बनाईएको नक्कल हो।
यो सबै कुरा हो, जुन केवल अवलोकन द्वारा स्वयं को बनािन्छ (मेनु आइटम को तहत मेरो लेख "सिमुलेशन 'हेर्नुहोस)
यो एक अतुल्य अनुकरण छैन: यो एक अनुकार हो
14 अक्टोबर 2018 मा 21: 04
हामी कत्तिको आयाममा हामी 'जागिर' छौं? यो अब साँच्चै ????
तपाईंको सबै प्रयास र सुपर रोचक व्याख्याको लागि धन्यवाद!
15 अक्टोबर 2018 मा 07: 23
धन्यवाद। म सोच्छु कि तपाईंको प्रश्न नयाँ लेखको योग्य छ
15 अक्टोबर 2018 मा 13: 05
माथि! म यसलाई हेर्न चाहन्छु!
14 अक्टोबर 2018 मा 23: 18
14 अक्टोबर 2018 मा 23: 43
कसरी यो सम्भव छ कि तीन अब्राहमिक धर्महरूले (काले) क्यूबको उपासना गर्दछ? यो क्वांटम मेकेनिकल नेक्सस बिन्दु शनि मा छ जसले हाम्रो 3D वास्तविकता सिर्जना गर्दछ?
क्वांटम हॉल प्रभाव, एक्सएनएनएक्सक्समा पत्ता लगाइयो, कन्डिसन फिज भौतिकीमा एक महत्त्वपूर्ण मौलिक प्रभाव हो जुन टोपोलोजी स्टेटहरू दुई-आयामी प्रणालीहरूमा इलेक्ट्रोनिक गुणहरूसँग जोडिएको छ।
क्वांटम भौतिकी साबित गर्दछ कि त्यहाँ एक जीवित छ, वैज्ञानिकको दावी छ
रबर्ट लान्जाले दावी को सिद्धान्त को दावा गर्दछ कि मृत्यु एक भ्रम हो
उहाँले जीवनले ब्रह्मांड सिर्जना गर्नुभयो, र अर्को राउन्ड नहोला
यसको अर्थ हामी रैखिक फैशनमा अवस्थित छैनौं जुन हामी सोच्दछौं
उहाँले प्रसिद्ध बिन्दु-विभाजन प्रयोगको प्रयोग गर्नका लागि आफ्नो बिन्दुको वर्णन गर्न
र यदि अन्तरिक्ष र समय रैखिक छैन, त्यसपछि मौत 'कुनै पनि वास्तविक अर्थ' मा अवस्थित हुन सक्दैन
14 अक्टोबर 2018 मा 23: 49
कारणले भौतिकीहरूको सबैभन्दा आधारभूत र आवश्यक अवधारणाहरूमध्ये एक हो।  कारणले प्रभावकारी प्रभावले प्रकाश भन्दा छिटो प्रचार गर्न सक्दैन। अन्यथा, समन्वय सन्दर्भ प्रणाली निर्माण गर्न सकिएन (कारणता को अभिधारणा उल्लङ्घन हुनेछ अर्थात्) एक अवलोकनकर्ताले एउटा प्रभाव देख्न जो यसको कारण लिनुअघि (को Lorentz परिवर्तन वा विशेष सापेक्षता प्रयोग)।
14 अक्टोबर 2018 मा 23: 58
15 अक्टोबर 2018 मा 07: 02
मात्र रबर्ट Lanza हामी जीवनको एक सिमुलेशन छन् भनेर बुझ्न हुनेछ जब उहाँले सबै सम्भव विकल्प खेलाडी (अर्थात् चेतना) को विकल्प मा आधारित छन् 'superposition' को स्रोत कोड मा गुप्तिकरण गरिएको हो मार्फत देख्नु हुनेछ। यसकारण अन्तहीन ब्रह्माहरूको लागि कुनै आवश्यकता छैन। छनौटहरूको अनन्त रकम सिमुलेशन (वा खेल) को सफ्टवेयरसँग तुलना गर्न सकिन्छ। तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि समयमा कुनै पनि (अनन्त) विकल्प (हरू) तपाईंको जोइस्टिक / नियन्त्रक र के त्यसैले materializes संग स्रोत कोड र तपाईंको छनौट दुवै (र बहु-खेलाडी खेल मा अन्य खेलाडीको ती) मा निर्भर गर्दछ।
'सबै सम्भावित अवलोकन' को 'सुपरस्पेस' एक क्वांटम-भौतिक रूप देखि प्रमाणित सिद्ध तथ्य हो, जो कि स्रोत कोड सबै संभावनाहरु लाई प्रदान गर्दछ। यसैले यो खेलाडी (आत्मा) जसले वास्तविकतालाई आधारको आधारमा बनाउँछ (स्रोत कोडमा एन्कोड गरिएको संभावनाहरु द्वारा सीमित)। एक खेल जस्तै एक आधारभूत नियम सेट को अनुसार बनाइयो र खेलाडीहरू नियन्त्रक द्वारा बनाईएको छनोटहरूमा आधारित स्क्रीनमा देखाइएको छ भनेर निर्धारण गर्दछ।
त्यसैले हामी आत्माहरू हौं जसले यस ब्रह्माण्डलाई प्लेस्टेशन टिभि स्क्रिनमा देख्दछ। यो लाग्छ, गंध, सुन्न, स्वाद र आजीवन देखिन्छ! यो एक अनुकार हो।
15 अक्टोबर 2018 मा 07: 09
को "चौथो आयाम" वैज्ञानिकहरू तिनीहरूले फेला पारेका छौं विश्वास जो वास्तवमा यो सिमुलेशन को स्रोत कोड / सफ्टवेयर (को सफ्टवेयर मा नियमहरूको आधारभूत सेट को 'superposition' रेकर्ड) छ।
यदि तपाईंले सफ्टवेयर बनाउनुहुन्छ र तपाइँलाई खेलाडीहरू खेलमार्फत सक्षम हुन चाहानुहुन्छ, यसको अर्थ तपाईंले स्क्रीनमा नियन्त्रणकर्ताको आचरणको हरेक सम्भावित परिणाम प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनु चाहानु हुन्छ। यसैले softaare यस छवि को नियन्त्रक संग तपाईंको आंदोलन को आधार मा प्रकट गर्दछ। यो हामी वास्तविकता बुझ्दछौं आत्माको छनौटहरूमा आधारित 'superposition' बाट।
यो तपाइँको मस्तिष्क वा तपाईंको शरीर जुन छनौट गर्दैन। यो आत्मा यो सिमुलेशनको पर्यवेक्षक हो (लुइसफरले लिखित नियमहरूको आधारभूत सेटसँग एक बहु खेलाडी खेल, यस अनुकरणको बिल्डर)।
15 अक्टोबर 2018 मा 07: 16
त्यसैले सिमुलेशनमा जीवन वास्तविक जीवन होइन र त्यसैले मर्नु पनि मरिसकेको छैन। खेलमा अवतार मात्र खेलेको छ।
एक्लो ब्लिङ जस्तै कि 2D मा फ्ल्याट विमानबाट जोगिन पहिले देखि नै हराएको छ, तर 3D माथि उडान र तल दुवै विमान अझै पनि अवस्थित छ।
हामी सह-खेलाडीहरू र बहु-खेलाडी अनुकरणका पर्यवेक्षकहरू हौं। यो जान्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
डबल स्लेट प्रयोग र सबै क्वांटम भौतिक सर्तहरू जस्तै 'क्वांटम विरूपण' र 'सुपरस्पेस' यो साबित हुन्छ।
15 अक्टोबर 2018 मा 07: 22
म यस सन्दर्भमा यो सन्दर्भलाई फेरि यो लेख पढ्न सिफारिश गर्दछु:
15 अक्टोबर 2018 मा 00: 00
फिल्म अन्तर्वार्ता (बाह्य) ले यो भिजुअल रूपमा व्याख्या गर्न खोज्यो ...
17 अक्टोबर 2018 मा 23: 07
मलाई आशा छ तपाईंले यो तस्वीरको साथ प्रोफाइल तस्वीर देख्नुभएको छ ...
15 अक्टोबर 2018 मा 08: 45
मार्टिन, के हामी चौथो आयाममा अवलोकन तुलना गर्न सक्छौं, उदाहरणका लागि, सांपहरू के बुझ्दछन्? सागहरू आँखा र नोस्टेल बीचको एउटा अंग छ जसले तिनीहरूलाई सानो मात्रामा अवरक्त विकिरण देखाउँदछ।
15 अक्टोबर 2018 मा 08: 50
होइन, त्यो प्रकाश को व्यापक स्पेक्ट्रम को एक धारणा मात्र हो।
चौथो आयाम वास्तवमा एक गलत शब्द हो। पृष्ठहरूमा वर्णन गरिएको चौथो आयाम, वेबसाइटहरू र विज्ञानमा, वास्तवमा अनुकरणको स्रोत कोड हो।
यदि यो सिमुलेसन अर्को सिमुलेसन भित्र चलेको छ भने, चौथो आयाम (आयामको परिभाषामा) वास्तवमा2आयाम वा बरु 1 आयाम उच्च (कसरी सिमुलेशनहरूमा कति सिमुलेशनहरू चलिरहेको छ)।
21 अक्टोबर 2018 मा 21: 12
यो दर्शनको बारेमा के हो? https://www.indigorevolution.nl/2018/09/24/het-synthetische-universum-oftewel-de-god-matrix/
तपाईंको दृष्टि संग धेरै सामान्य जमीन छ। VR म्याट्रिक्स चश्माले एक जैविक पृथ्वीले अनुभव गरेको छ? उदाहरणका लागि, कसरी प्रकृतिमा राम्रो महसुस गर्न सक्छ? मैले अहिलेसम्म पुगेको छैन जहाँ मैले 100% सिमुलेशनको आश्वस्त छु। के तपाईं माथिको दृष्टि बहिष्कृत गर्नुहुन्छ?
21 अक्टोबर 2018 मा 21: 40
जहाँसम्म मेरो चिन्तित छ यो पुरा तरिकाले सही छैन। हामी सबै आयामहरूको माध्यमबाट उपस्थित छौं भन्ने तथ्य हो, किनकि यदि सिमुलेशनमा सिमुलेशनहरू छन् भने तपाई सधैँ खेलाडी हुनुहुन्छ।
म सच्चै गम्भीरतापूर्वक सिफारिश गर्दछु कि डबल स्लिट्स प्रयोगको अवधारणा राम्रो तरिकाले घुसाउनुहोस्।
टम क्याम्पबेलले यो साँच्चै राम्रो वर्णन गर्छ। केवल उनले अझै सम्म यो थाहा पाएन कि लुसिफरियन प्रकृति को यो अनुकरण, तर यो एक हेलीकाप्टर दृश्य देखि देखी जान्छ वास्तव मा केवल यो सिमुलेशन को एक समस्या हो।
« पार्कोर एटलास रोबोट: तपाईंले अहिलेसम्म केही पनि देख्नु भएको छैन
मृत्युको डर किन सबै समयको सबैभन्दा ठूलो झूटो हो »
कुल भ्रमण: 4.232.070
मार्कोस op कोरोनाभाइरस कोविड - १:: हामीले मौरिस डि होण्ड र विलेम एन्जल, भाग २ को बारेमा के सुनेनौं